Bitcoin က တကမ္ဘာလုံးမှာ တစ်ခုတည်းသောငွေကြေးဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ Twitter CEO
22 Mar 2018 . 10:59 AM
Twitter နဲ့ Square ကုမ္ပဏီ ၂ ခုမှာ CEO အနေနဲ့ တာဝန်ယူထားတဲ့ Jack Dorsey ကတော့ Digital Currency တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bitcoin အပေါ်မှာ ကြီးမားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေတဲ့ပုံပါပဲ။ လတ်တလောက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Times မဂ္ဂဇင်းနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ Dorsey ကအခု Cryptocurrency – ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေက တကမ္ဘာလုံးမှာ တစ်ခုတည်းသောငွေကြေးဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Jack Dorsey ကတော့ “ကမ္ဘာကြီးမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ငွေကြေးတွေဟာ တစ်ခုထဲဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး အင်တာနက်မှာလည်း အသုံးပြုတဲ့ငွေကြေးကတစ်ခုထဲဖြစ်လာမှာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်အရတော့ အဲ့ဒီငွေကြေးက Bitcoing ဖြစ်လာမှာပါ” လို့ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးလည်း အခုလိုမျိုး ငွေကြးတစ်ခုထဲအနေနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အချိန်ကို မေးမြန်းရာမှာ “ဆယ်နှစ်အတွင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီထက်တောင် ပိုမြန်နိုင်တယ်” လို့ ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ပြောကြားချက်ဟာ လက်ရှိ Bitcoin ရဲ့ အလွန်အတက်အကျကြမ်းနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိဘူးလို့တောင်ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းတုန်းက Bitcoin ရဲ့ တရှိန်ထိုးတန်ဖိုးတိုးတက်မှုတွေကြောင့် အခု Crytocurrency အပေါ်ကို လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိစေခဲ့တာလည်း မမှားပါဘူး။
Jack Dorsey ဟာ တရားဝင်မဖော်ပြထားပေမယ့် Bitcoin တွေကို စုဆောင်းသူတစ်ယောက်လို့ သိရပြီး သူ CEO အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ Square ကုမ္ပဏီမှာလည်း မကြာသေးမီကမှာ Bitcoin နဲ့ ငွေပေးချေလို့ရတဲ့ Option တစ်ခုကို Square Cash App မှာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်တုန်းက The Verge နဲ့ အင်တာဗျူးမှာလည်း Bitcoin ကို နိုင်ငံတကာငွေကြေးအတွက် နောက်ထပ်ဖွင့်လှစ်ရမယ့်အဆင့်တစ်ခုလို့ ပြောကြားခဲ့သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Jack Dorsey ပြောသလိုပဲ Bitcoin ဟာ တစ်ခုတည်းသောငွေကြေးဖြစ်လာနိုင်မလား?
Twitter နဲ့ Square ကုမ်ပဏီ ၂ ခုမှာ CEO အနနေဲ့ တာဝနျယူထားတဲ့ Jack Dorsey ကတော့ Digital Currency တဈခုဖွဈတဲ့ Bitcoin အပျေါမှာ ကွီးမားတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှရှေိနတေဲ့ပုံပါပဲ။ လတျတလောက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ The Times မဂ်ဂဇငျးနဲ့ အငျတာဗြူးမှာ Dorsey ကအခု Cryptocurrency – ဒီဂဈြတယျငှကွေေးတှကေ တကမ်ဘာလုံးမှာ တဈခုတညျးသောငှကွေေးဖွဈလာမယျလို့ ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Jack Dorsey ကတော့ “ကမ်ဘာကွီးမှာ အသုံးပွုနတေဲ့ ငှကွေေးတှဟော တဈခုထဲဖွဈလာမှာဖွဈပွီး အငျတာနကျမှာလညျး အသုံးပွုတဲ့ငှကွေေးကတဈခုထဲဖွဈလာမှာပါ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ထငျမွငျခကျြအရတော့ အဲ့ဒီငှကွေေးက Bitcoing ဖွဈလာမှာပါ” လို့ ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဆကျလကျပွီးလညျး အခုလိုမြိုး ငှကွေးတဈခုထဲအနနေဲ့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့အခြိနျကို မေးမွနျးရာမှာ “ဆယျနှဈအတှငျးဖွဈလာနိုငျတယျ၊ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီထကျတောငျ ပိုမွနျနိုငျတယျ” လို့ ဖွကွေားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုး ပွောကွားခကျြဟာ လကျရှိ Bitcoin ရဲ့ အလှနျအတကျအကကြွမျးနတေဲ့အခွအေနနေဲ့ ခြိနျထိုးကွညျ့မယျဆိုရငျ ဖွဈနိုငျဖှယျရာမရှိဘူးလို့တောငျယူဆလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ လပိုငျးတုနျးက Bitcoin ရဲ့ တရှိနျထိုးတနျဖိုးတိုးတကျမှုတှကွေောငျ့ အခု Crytocurrency အပျေါကို လူတှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှုကို ရရှိစခေဲ့တာလညျး မမှားပါဘူး။
Jack Dorsey ဟာ တရားဝငျမဖျောပွထားပမေယျ့ Bitcoin တှကေို စုဆောငျးသူတဈယောကျလို့ သိရပွီး သူ CEO အဖွဈတာဝနျယူထားတဲ့ Square ကုမ်ပဏီမှာလညျး မကွာသေးမီကမှာ Bitcoin နဲ့ ငှပေေးခလြေို့ရတဲ့ Option တဈခုကို Square Cash App မှာ ထညျ့သှငျးပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ယခငျတုနျးက The Verge နဲ့ အငျတာဗြူးမှာလညျး Bitcoin ကို နိုငျငံတကာငှကွေေးအတှကျ နောကျထပျဖှငျ့လှဈရမယျ့အဆငျ့တဈခုလို့ ပွောကွားခဲ့သေးတာပဲဖွဈပါတယျ။
Jack Dorsey ပွောသလိုပဲ Bitcoin ဟာ တဈခုတညျးသောငှကွေေးဖွဈလာနိုငျမလား?